USB STORAGE DEVICE ​ခေါ် flash drive ​များ​ကို ​ဘယ်​လို​ပိတ် ​ထား​နိုင်​မ​လဲ . ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
USB STORAGE DEVICE ​ခေါ် flash drive ​များ​ကို ​ဘယ်​လို​ပိတ် ​ထား​နိုင်​မ​လဲ .
flash drive ​ကို ​ဘယ်​လို ​ပိတ်​ရ​မ​လဲ ​အစ်​ကို​လို့ ​မေး​ထား​တဲ့ ​ညီ​ငယ်​တစ်​ယောက် ​အ​တွက် ​ပြန်​ဖြေ​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ .
​ကျွန်​တော်​တို့ ​ပိတ်​မယ့် usb port ​မှာ ​နှစ်​မျိုး​ရှိ​တယ်​လို့ ​အ​ကြမ်း​ဖျင်း ​မှတ်​ထား​ပေး​ပါ . usb port ​မှန်​သ​မျှ​ကို ​ပိတ်​လို့​ရ​တဲ့ ​နည်း​လဲ​ရှိ​ပါ​တယ် . ​အ​ခု ​ကျွန်​တော်​က ​အဲ့​ဒီ့​နည်း​ကို ​မ​သုံး​ချင်​ဘူး . virus ​ဝင်​မှာ​စိုး​လို့ flash drive ​တွေ​ကို​ပဲ ​ပိတ်​ထား​မယ် . Printer, Scanner, webcom, ​စ​တဲ့ port ​တွေ​ကို​တော့ ​အ​သုံး​ပြု​ခွင့်​ပေး​ထား​မယ် . ​ပိတ်​မှာ​က storage device ​တစ်​ခု​တည်း​ကို​ပဲ ​ပိတ်​မယ် . storage device ​မှာ flah drive ​တင်​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး ​တစ်​ခြား external storage device ​တွေ​ဖြစ်​တဲ့ MP3 (or) MP4 Player, ipot, iphone, external HDD , Digital Camera ​စ​တာ​တွေ​ကို​လဲ ​ပိတ်​ထား​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ် . program ​မ​လို​ဘဲ ​လတ်​တ​လော menual ​နည်း ​နဲ့ ​လုပ်​ကြည့်​ကြ​ရ ​အောင်​ပါ .
Start >> Run ​ကို ​ခေါ်​ပါ .
regedit ​ကို​ရိုက်​ထည့်​ပြီး OK ​ပေး​လိုက်​ပါ .
Registry Editor Box ​ပေါ်​လာ​ရင် ​အောက်​က ​အ​တိုင်း ​သွား​လိုက်​ပါ . ​အောက်​မှာ
​ပုံ(၁) ​နှင့် (၂) ​မှာ ​ပြ​ထား​ပေး​ပါ​တယ် . ​မ​ရှင်း​ရင် ​ပုံ​တွေ​ကို ​က​လစ်​နှိပ်​လိုက်​တာ​နဲ့ ​ပုံ​ကြီး​ပေါ်​လာ ​ပါ​လိမ့်​မယ် HKEY LOCAL MACHINE >> SYSTEM >> CurrentControlSet >> Services >> USBSTOR ​ကို ​သွား​ပြီး ​ပုံ​နှစ်​ထဲ​က​အ​တိုင်း2​ချက်​နှိပ်​လိုက်​ပါ . box ​တစ်​ခု ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် .
​အဲ့​ဒီ့ Box ​မှာ ​ပေါ်​နေ​တဲ့ ​နံ​ပါတ်​ကို "3" ​က​နေ "4" ​ကို​ပြောင်း​ပေး​လိုက်​ပါ .
​အဲ့​ဒါ​ဆို​ရင် usb storage device ​များ​ကို ​ပိတ်​ထား​ပြီး​သား ​ဖြစ်​သွား​ပါ​ပြီ . ​သူ့​ကို ​အ​သုံး​ပြု​ခွင့် ​ပြန်​ပေး​မယ်​ဆို​ရင် "4" ​က​နေ "3" ​ကို ​ပြန်​ပြောင်း ​ပေး​လိုက်​ပါ .
flash drive ​ကို format ​ချ​မ​ရ​ရင်​ဖြင့်
USB STORAGE DEVICE ​ခေါ် flash drive ​များ​ကို ​ဘယ်...
​ဒါ​က​တော့ ​အ​ခု​နောက်​ပိုင်း ​လူ​သုံး​များ​လာ​တဲ့...